သစ္စာလေးပါးဟူသည် အဘယ်နည်း - ဖြတ်သန်းခဲ့သော ဘဝပုံရိပ်များ
Home ရေခံမြေခံ လေ့လာခြင်း သစ္စာလေးပါးဟူသည် အဘယ်နည်း
Samuel Soe lwin 7:01:00 AM ရေခံမြေခံ, လေ့လာခြင်း,
၁။ သစ္စာလေးပါးနှင့် ဆက်နွယ်မှုများ။
သစ္စာလေးပါးဟူသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ သမိုင်းသုသေတီများ၏ဆင့်ကမ်းစကားအရ ဂေါတမဗုဒ္ဓ၏ ပထမဦးဆုံးတရားဦးလည်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြ သည်။ သူတို့ယုံကြည်မှုအရ ထိုတရားတို့ကို ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့၊ သိရှိခံစားလာရပြီဆိုလျင် ထိုတရားထက်ပိုပြီး အရေးပါ လှသည်ဟုဆိုကြသည်။
ထိုသစ္စာလေးပါးနှင့်အတူ အခြားဆက်နွယ်နေသော ယုံကြည်မှုမှာ - …..
(၁) လူ၀င်စားခြင်း (သံသရာ) နှင့်
(၃) သစ္စာလေးပါးတို့သည် ဆက်နွယ်လျက်ရှိသော မဏ္ဍိုင်များဖြစ်ကြသည်။
(၄) မဂ္ဂသစ္စာတည်းဟူသော မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးတို့ပင်ဖြစ်သည်။
ပထမဦးဆုံးသော သစ္စာတရားတစ်ခုမှာ လူ့ဘ၀ဟူသည် ဒုက္ခများဖြင့် ပြည့်နှက်နေသောဘဝဖြစ်စဉ်ကို အရှိ တရားအတိုင်းရှုမြင်လျက် ဒုက္ခသစ္စာဟုဆိုသည်။ အင်္ဂလိပ်လိုအားဖြင့် ထို Dukkha ဟူသောစကားလုံးကိုဖွင့်ဆို ရာတွင်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးသည်ဟုဆိုကြသည်။ အထူးသဖြင့် ဒုက္ခသစ္စာဟုဆိုရာတွင် ဘ၀တွင်ကြုံတွေ့ရ သော အနိဌာရုံများအားလုံးကို ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပေ။
ဒုက္ခသစ္စာဟူသောအခြေခံမှာ ဒုက္ခ၊ သောက၊ ပရေိ၀ဒနှင့် အပူပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်ကို အခြေပြုထား ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုဒုက္ခသစ္စာကိုအခြေတည်ပြီးမှသာလျင် ယုံကြည်မှု၊ ကျင့်သုံးမှုတို့ကိုဆင့်ပွားလာခြင်းဖြစ်သည်။
ယုံကြည်မှုအရ ဒုက္ခသစ္စာဟူသည် လူသားတို့တွင်ရှိနေသော ….
* ထိုအမှားများမှာ လွဲမှားသောလိုချင်တပ်မက်မှုများမှဖြစ်လာပြီး
* ထိုလွဲမှားသောတပ်မက်မှုသည်လည်း ယာယီဖြစ်သောစိတ်ဆန္ဒကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုဒုက္ခသစ္စာကို ဖွင့်ဆိုမှုပြုလာသည်နှင့် ဒုတိယသစ္စာဖြစ်သော “သမုဒယသစ္စာ” အလိုလိုမှီတည်ပြီးဖြစ်သည်။
မှားယွင်းနေသော လူ့ဘဝဖြစ်စဉ်ကို မည်သို့ကုစားမည်နည်း
ထိုသမုဒယသစ္စာကို အနိစ္စဟုလည်းလူသိများပြီး (သို့) တဏှာဟူလည်းဆိုကြပြန်သည်။
အထူးသဖြင့် “ဖြစ်တည်မှု - Self” သည်ပင်လျင် ထာ၀ရမဟုတ် (သို့) အမြဲမပြောင်းမလဲတည်ရှိနေသော အရှိ တရားမဟုတ်ဟုဆိုသည်။
ထိုအရာကိုပင်လျင် လူသားတို့၏ဖြစ်တည်မှုဟု ခံယူရှင်းပြလေ့ရှိသည်။
ထိုမျှမက အကောင်းမြင် (သို့) ကောင်းသောစိတ်ဆန္ဒများပင်လျင် သံသရာကိုလည်စေပြီး၊ ဒုက္ခကိုပေးသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ထိုဖြစ်စဉ်များကို သဘောပေါက်နားလည်ရန် တတိယသစ္စာတရားတည်းဟူသော “နိရောဓသစ္စာ” ကိုသိရှိနား လည်ရန်လိုအပ်လာပြန်ပါသည်။
နိရောဓသစ္စာဟူသည် အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ သေခြင်းတည်းဟူသည်အမှန်ဖြစ်ပြီး ထိုဘဝဖြစ်စဉ်များမှ လွတ် မြောက် စေနိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသောလမ်း (သို့) တပ်မက်မှုတဏှာအပေါင်းတို့၏ လွတ်မြောက်ရာ လမ်းဟုဆိုကြ သည်။
“မှားယွင်းနေသော လူ့ဘဝဖြစ်စဉ်ကို မည်သို့ကုစားမည်နည်း” ဆိုသော မမြဲသောဆင်းရဲခြင်းတို့၏ အဖြေ အဖြစ် ရှုမြင်သုံးသပ်၍ လက်ခံယုံကြည်ကြသည်။
လက်တွေ့အားဖြင့် ထိုနိရောဓသစ္စာသည် “စိတ်ဆန္ဒအပေါင်းကိုချုပ်ငြိမ်းစေခြင်း”ဟုဆိုရပေမည်။ ထိုသို့ဆိုကြ ရာတွင် စိတ်ဆန္ဒတည်းဟူသော….
ထိုအရာများအားလုံးကို ပြည့်စုံပြီးမြောက်စေရန်အတွက် စတုတ္ထသစ္စာတရားဖြစ်သော “မဂ္ဂသစ္စာ” တွင်သာ ဗဟိုပြုထားလျက်ရှိသည်။
“မဂ္ဂသစ္စာ” တရားတွင် မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးအဖြစ် ဖွဲ့စည်းထားသည်ဟုဆိုရပေမည်။
“လူ့ဘ၀အဖြေ” များကိုမည်သို့ပြီးမြောက်စေမည်ကို ထိုလမ်းစဉ်များတွင်တွေ့မြင်နိုင်မည်ဟုဆိုသည်။
(၁) သမ္မာဒိဌိ - The right views
(၂) သမ္မာသင်္ကပ္ပ - The right intent
(၃) သမ္မာဝါစာ - The right speech
(၄) သမ္မာကမ္မန္တ - The right behavior
(၅) သမ္မာအာဇီ၀ - The right livelihood
(၆) သမ္မာဝါယမ - The right effort
(၇) သမ္မာသတိ - The right awareness
(၈) သမ္မာသမာဓိ - The right meditation ဟူ၍တွေ့ရပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာတို့၏ ယုံကြည်ကျင့်သုံးမှုအရ အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ သေခြင်းတည်းဟူသော ဒုက္ခအပေါင်းမှ လွတ် မြောက် စေနိုင်သည့်လမ်းစဉ်မှာ သစ္စာလေးတရားနှင့်အညီ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး၏ လမ်းစဉ်အတိုင်းကျင့်သုံး ခြင်း ဖြင့်သာ ထိုသံသရာမှ လွတ်ငြိမ်းနိုင်ပါသည်။
ထိုသို့လွတ်မြောက်ခြင်းတွင် အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ သေခြင်း၊ သောက၊ ပရေိ၀ဒစသော လူမှုဒုက္ခများ ကင်းစင်သွား ခြင်း ဖြစ်စဉ်ကို ပြညွန်ထားပါသည်။
ထို “ဘာမှမဖြစ်တော့ခြင်း” ကို “နိဗ္ဗာန်” ဟုထင်ရှားစွာ လူသိများလှပြီး၊ ၎င်း “နိဗ္ဗာန်” မှာလည်း သူတို့၏အန္တိမ ပန်းတိုင်ပင်ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ “နိဗ္ဗာန်” ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားသူအနေဖြင့် -----
သေခြင်းတည်းဟူသော ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဖြစ်သော သံသရာတွင် ထပ်မံလည်ပတ်နေစရာမလိုတော့ပေ။ အို၊ နာ၊ သေခြင်းတို့မှ ကင်းလွတ်သွားခြင်းကို ဆိုထားသည်။
၈။ သစ္စာလေးပါးနှင့် သမ္မျာကမ်းစာ။
လူများ၏ သုံးသပ်လေ့လာမှုအရ ထိုသစ္စာလေးပါးနှင့် သမ္မာကျမ်းစာတို့သည် လုံး၀ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်နေ သည်ဟု မဆိုနိုင်။
(၁) လွဲမှားသောဆန္ဒ၊ တဏှာသည် အပြစ်တရားအဖြစ်မြင်တွေ့ရသည် (ရောမ၊ ၁၃း၁၄၊ ဂလာ၊ ၅း၁၇)။
(၂) အို၊ နာ၊ သေခြင်းရှိသော ယခုဘ၀သည် အမြဲမပြတ်ပြောင်းလဲနေသည် (ယာ၊ ၄း၁၄)။
(၃) မတည်မြဲသောလောကီဘဏ္ဍာဆည်းပူးခြင်းသည် မိုက်မဲရာမည်သည် (မ၊ ၆း၁၉-၂၀)။
သို့သော် ထာ၀ရကာလနှင့်စပ်ဆိုင်သောအရာတွင် သစ္စာလေးပါးနှင့် သမ္မာကျမ်းစာတို့ရှုမြင်ပုံမှာ ကွဲလွဲလာ သည်။
၉။ ကွဲပြားသော သွန်သင်မှုသြဝါဒများ။
နှုတ်ကပတ်တော်၏ သွန်သင်မှုမှာ ….
(၁) ဘုရားသည် ထာ၀ရတည်ရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့လည်းအတူစိုးစံကြရမည်(မ၊ ၂၅း၂၁၊ ယော၊ ၄း၁၄၊ ၁၀း၂၈)။
(၂) ယုံကြည်သူ လူတိုင်းထာ၀ရအသက်ရှင်သန်ကြရမည် (၂ သက်၊ ၁း၉)။
(၃)မယုံကြည်သူတို့လည်း ထာ၀ရစီရင်ခြင်းခံကြရမည် (လု၊ ၁၆း၂၂-၂၄)။
(၁) လူသည် မဆုံးနိုင်သော သံသရာလည်ခြင်း (သို့) နိဗ္ဗာန်ဖြင့်အဆုံးသတ်ခြင်းကိုပြဆိုထားသည်။
နှုတ်ကပတ်တော်၏ သွန်သင်မှုကိုကြည့်လျင် -------
“လူသည် တစ်ခါတည်းသေ၍ ထို့နောက်တရားစီရင်ခြင်းကို ခံရမည်” (ဟေဗြဲ၊ ၉း၂၇) ဟုဆိုထာပါသည်။
ဘာသာနှစ်ရပ်လုံးက လူသားတို့၏ စိတ်နှလုံးနှင့် အကျင့်စာရိတ္တပြောင်းလဲရန် လိုအပ်ကြောင်း သွန်သင်ထား ကြ ပါသည်။
(၁) မိမိကိုယ်ကိုအားကိုးလျက် ပြောင်းလဲစေခြင်း
(၂) ဘုရားသခင်အားဖြင့် ဘ၀ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းသည်သာ ခြားနားမှု၊ ဝိသေသအဖြစ်တွေ့မြင်ရသည်။
လူတို့၏ စိတ်နှလုံးနှင့် ပြုမူ၊ ကျင့်ကြံမှုများကို ပြောင်းလဲလာရန်ဆိုထားပါသည်။ “စိတ်နှလုံးသည် ခပ်သိမ်းသောအရာထက် စဉ်းလဲတတ်၏။ အလွန်ယိုယွင်းသော သဘောရှိ၏။ စိတ်နှလုံး သဘောကို အဘယ်သူသိနိုင်သနည်း”( ယေရမိ၊ ၁၇း၉၊ မာ၊ ၉း၂၄)။
“ပုထုဇ္ဇနော ဥမ္မတ္တကော” အစရှိသဖြင့် လူ့စိတ်အခြေအနေများကိုဖော်ပြထားမှုများ အားလုံးအသိပင် ဖြစ်သည်။
အထက်ပါဖြစ်စဉ်ကို နှုတ်ကပတ်တော်က အောက်ပါအတိုင်းအဖြေပေးထားပါသည်။
“အထက်က သင်တို့တွင် အချိုကသောသူတို့သည် ထိုသို့သောသူဖြစ်ကြသော်လည်း၊ ယခုတွင်သခင်ယေရှု၏ နာမတော်အားဖြင့်၎င်း၊ ငါတို့ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်၎င်း၊ ဆေးကြောသန့်ရှင်း၍ ဖြောင့်မတ်ရာ သို့ရောက်ကြပြီ”(၁ ကော၊ ၆း၁၁)။
ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာကိုလည်း အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားပါသည်။“သင်တို့သည် လောကီပုံ သဏ္ဌာန်ကို မဆောင်ကြနှင့်၊ ကောင်းမြတ်သောအရာ၊ နှစ်သက်ဘွယ်သောအရာ၊ စုံလင်သောအခါတည်း ဟူသော ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိသောအရာသည် အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို သင်နိုင် မည်ကြောင်း၊ စိတ်နှလုံး ကိုအသစ်ပြင်ဆင်၍ ပုံသဏ္ဌာန်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြလော့”(ရောမ၊ ၁၂း၂)။
ထိုဘာသာနှစ်ရပ်ကြားတွင် ကွဲပြားခြားနားသော အခြားအရာများလည်းရှိနေပါသည်။
(၁) ဘ၀သည် ဒုက္ခအတိဆိုထားချိန် နှုတ်ကပတ်တော်က
(၂) ဘ၀သည် အထူးသဖြင့်အသက်နှင့်ပြည့်စုံစေခြင်း (ယော၊ ၁၀း၁၀)ဟုဆိုထားသည်။
ထို့အတူ လူတစ်ဦး၏ဘဝဖြစ်တည်မှုကို ----
(၁) လုံး၀ချုပ်ငြိမ်းစေရမည်ဆိုထားချိန် နှုတ်ကပတ်တော်က
(၂) လူတိုင်းဘ၀သည် တန်ဖိုးရှိပြီး၊ အဖိုးထိုက်လှသည် (က၊ ၁း၂၆-၂၇၊ မ၊ ၅း၂၂) ဟုဆိုပြီး
(၃) ထိုဘဝဖြစ်တည်မှုသည် သေသည်၏နောက်တွင်ပင် ထာ၀ရတည်သည် (ယော၊ ၁၄း၃) ဟုဆိုထားပါသည်။
မြန်မာပြည်ရှိ ယုံကြည်သူများ ဘာသာတရားအကြား အသိဖလှယ်၍ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ပိုမိုပြီးပြည့်စုံသော မိတ်သဟာယကို တည်ဆောက်နိုင်စေရန် ဘုရားသခင် ဆက်လက်လမ်းပြပါစေသော်၀်…
မှတ်ချက်။ ။ What are the Four Noble Truths? အားမြန်မာမူပြုပါသည်။
by Samuel Soe lwin - 7:01:00 AM